waxa ayna bishii hore ee malabka kadib bilowday in ay lasoo baxdo dabcigeedii xumaa*qiso yaab leh* | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
waxa ayna bishii hore ee malabka kadib bilowday in ay lasoo baxdo dabcigeedii xumaa*qiso yaab leh*
Ma ogtahay aqristow in dadka waal waalan xiliyada qaar laga helo xigmado dhaxal gal ah oo wax badan saameen ku yeesha dadka caafimaadka qaba waxaana xiliyada qaar ay xaliyaan Mushkilado ay xaliyi waayeen dadka miirka qaba.
Qisadan ku saabsan ninka waalan ee sababta u noqday in ay dib isku jeclaadaan lamaane is necbaa oo go’aan saday in ay kala tagaam (is furaan) inta aanan gudo galin bal aan idin xasuusiyo dhacdooyin goos goos ah oo laga wariyay dad waal waalan.
Waxaa dhacday in maalin ka mid ah maalmaha xiligii ay jirtay Dowladdii Maxamed Siyaad Barre uu Madaxweynaha booqday xarunta maana koobiyada oo aheyd halka lagu xanaaneeyo dadka waal waalan waxaana xiligaasi lasocday Madaxweynaha ilaalo fara badan.
Nin waalan oo ka mid ah dadkii ku xirnaa meesha ayaa qosol la dhacay marka uu arkay Madaxweyne Siyaad oo ay garab ordayaan koox dabley hubeysan ah waxaana uu yiri alla ninkan ayaaba iga waali badan maxaa yeelay ani labo qof bis ayaa i waday markii halkan la iikeenayay laakiin Ninkan dad badan ayaa wada kkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Waxaa sidoo kale dhacday qisooyin taa lamid ah oo dad badan ay layaabeen laakiin waxaa hubaal ah in dadka waalan qaar kood laga helayo talooyin lagu najaaxo iyo murti maskaxdaada ka weynaata.
Yaan hadal idinku daalin waxba qisada maanta aanu ka sheekey neyno ayaa ka dhacday Somaliya mudo laga joogo halsano waxaana ay ku bilaabaneysaa sidan.
Muqtaar waxa uu ahaa wiil madi ah (kali ku ah hooyadii iyo aabihii) waxa uu ku noolaa Caasimadda Dalkeena hooyo ee Somaliya noloshiisana ma aheyn mid lagu tilmaami karo liidasho marka loo eego qoysaska dariska la ah waxa uu xili walba ku hamiyi jiray in mar uun uu guursado taas oo ugu danbeyntii u suura gashay.
Waxa uu nasiib u yeeshay in uu nolosha la qeybsado Nasteexo gabadh la yiraahdo oo aheyd xiligaasi gabadhii ugu wanaagsaneyd xaafada uu daganaa marka la eego dhan waliba hadii ay ahaan laheyd xaga quruxda, edebta, iyo aqoonta.
Nasiib xumo gabadhu waxa ay aheyd inan dabci qalafsan oo daneysato ah waxa ayna bishii hore ee malabka kadib bilowday in ay lasoo baxdo dabcigeedii xumaa kaas oo wadna qabad ku noqday muqtaar oo wiil maskiin ah dulqaadna badan ahaa nasiib darona ay ku dhacday horaa loo dhahay waxaa jeceshahay lama helo.
Subaxdi marka uu baxayo waxa ay ku sagootin jirtay guryan (hadal hoose oo duritaan ah) habeenkina markuu shaqada ka yimaado halkii uu nafisi lahaa qeylo iyo hadalo maalaa yacni ah oo aan loo baahneen.
Dulqaadki ayaa dhamaaday lamaanahanina waa ay sii xumaatay isla joogooda taasina waxa ay keentay in habeenkii danbe ay ku balamaan in ay kala is furaan si qofwalba uu u day daydo qofka ku haboon noloshiisa.
Nin adeer u ahaa Muqtaar isla markaana waalnaa ayaa waxa uu ku xirnaa qol ku dhagan qolka jiifka ee muqtar kaas oo maqlayay go’aanka ay labaduba wada qaateen kuna qanacsan yihiin waxaana marka waaga uu baryay lamaanihiina ay soo tooseen uu ku gabyay heesay ama ku digriyay taa doonto u qaado ee erayadan soo socda.
“Ma ogtihiin in nabigu uu yiri noloshu waa waqti kooban oo raaxo ah ninkii raaliya helaa ayaana ku najaaxay oo ma ogtihiin in naagta oo adeecda ninkeeda uu yahay shey waajib ah janadana ay ku galeyso sameyn tiisa”
Nasteexo hadalkaasi dhagaheeda ku dhacay ayaa ku noqday eebo wadnaha lagaga dhuftay oo kale waxa ayna mudo daqiiqado ah ku dul fakareysay iyadoo ilmeyneysa kana qoomameyneysa dhaqankeedii xumaa ninka waalan dushiisa laakiin nasiib xumo ninkii waalnaa oo caan ku ahaa dad dilidda ayaa daqar aysan fileyn madaxa kaga dhiftay taa oo keentay in cisbital loola cararo.
Halkaasi waxaa ku fashilmay furiinkii ay ku heshiiyeen lamaanahani nolosha ay usoo urtay waxii ka horeeyay hadaladii ninka waalan waxaana nasteexo ay noqotay naag raaliyo ah oo ninkeeda ku kasbatay qalbigiisii ay jabisay mudo kooban iyadoo ciladii kaliya oo ay laheyd (waa dabeecad xumadiiye) halkaasi ku bur burisay.
Comment by Ahmed on May 4, 2011 9:47 pm
Runti hadi an ka hadlo arinta jacaylka runti halka u dhibka kataganyahay waxa waye hadi anu nahay dhalinta somaliyeed siiba kuwa sanadkan so ifbaxay waxa ey leyihiin 1 dabeecad kuligod tasoo eh aaamin daro u dhexeysa gebarta iyo wilka is jecel iyo beeen weliba kalsoni la.an u dhexeysa lamanaha is jecel e dhalinta somaliyed ah fakradi ahmed cabdi axmed kashka
habeen iyo maalinse waxaan isku sifeeyaa inaan ahay naag dembi culus gashay Sidee naf kaa janjeerta usoo jiidan laheyd